प्रचण्डको खास खुलासाले ओलीलाई तनाव, के भने ? (विशेष अन्तर्वाता) | सु-सुचित नेपालको चित्र
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले साढे दुई वर्षपछि केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पद नछाड्ने कल्पनै नगर्ने बताएपछि यतिबेला केपी ओलीलाई छटपटि भएको बालुवाटार श्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रचण्डले विगतमा भएको सहमतिअनुसार अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन् । रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलालाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले सहमतिविपरित कुरा गर्न थालियो भने चिज अर्को ढंगले जाने बताए ।
प्रस्तुत छ प्रचण्डसँग धमलाले गरेको कुराकानीको अनतरंग कुराकानी :
केपी शर्मा ओलीले तपाई प्रधानमन्त्री बनाउनु होला रु तपाइलाई विश्वास छ ?
अँ त्यो सहमति हामीबीच भएकै छ । केपी जी र मेरो कुरा हुँदा हामी सहमतिअनुसार नै जाने भन्ने कुरा हामी प्रतिबद्ध छौं । त्यसकारण म अहिले आशंका गर्न पनि चाहन्न । र यो विषय फेरी के हो भने उहाँ (ओली) र म बीच सहमति भयो भने पाँचै वर्ष केपीजी नै प्रधानमन्त्री भए पनि हुन्छ ।
जे हुन्छ सहमतिबाट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो छ । पार्टीले डिसिजन गर्ने कुरा हो । त्यस्तो कुराको अहिले म कल्पना गर्न चाहदिनँ । मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई दुस्ख, सुख अप्ठ्यारोमा रक्षा गर्न मेरो ठाउँबाट बल गरिराखेकै छु। तपाईंहरूले देखिराख्नुभएकै छ । मैले सरकारको पक्षमा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा जनताको बीचमा पब्लिक कार्यक्रममा पनि, सरकारले गरेका राम्रा कार्यक्रममा पनि के-के हुन् भनेर भनिराखेको छु । त्यसैले म अहिले तपाईंको यो प्रश्नमा जान चाहन्नँ । त्यसो गर्नु अहिले वास्तवमा उचित हुन्न । हामी सहज ढंगले कुराकानी गरिराखेका छौं ।
एकतादेखि अहिलेसम्म कहीँ हाम्रा कमीकमजोरी छन् भने समीक्षा गर्ने र सच्याउने तर्फ बल गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ गैराखेका छौं । त्यसकारण भोलि (साढे दुई वर्षमा) छाड्नुहुन्न (प्रधानमन्त्री) भन्ने म कल्पना गर्न चाहन्नँ । यो विषय जे हामीले समझदारी गरेका छौं । त्यो समझदारी अनुसार जान्छ भन्ने विश्वासका साथ काम गर्ने भन्ने छ मेरो । यसरी नै बुझ्नुहोला । योभन्दा बढी यसमा नसोध्दा ठीक हुन्छ ।
दोश्रो सवाल जनताको सुशासन र विकास तथा समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने कुरा हो । जनताले कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार भएको बेला सुशासनको अनुभूति गर्‍यो कि गरेन रु यो एउटा सवाल हो भने अब जनताले देशमा विकास हुने भयो । भ्रष्टाचारमुक्त समाजतिर पनि यो अगाडि बढ्यो । विकास र समृद्धितिर पनि गयो । सरकार र पार्टी नेताको अर्को कुनै स्वार्थ छैन भन्ने जनताले बुझ्यो भने चिज एक ढंगले जान्छ ।
ओली र तपाईंबीचमा असझदारी बढ्यो । दूरी बढ्यो भन्नेहरू पनि छन् नि बाहिर ?
माधवकुमार नेपाल बामदेव गौतम झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठको बीचमा एउटा सहमति भैसकेको छ रे । संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर तपाईं प्रधानमन्त्री बन्ने, त्यो निर्णय भएको हो ?